Ithegi: smartfocus | Martech Zone
I-SmartFocus ibhengeze kwiNkomfa yeHlabathi yeFowuni namhlanje ukuba izakube inikezela ngeebhakoni zokuqala zehlabathi. Ii-beacons ezibonakalayo zivumela ukuthengisa okusekwe kufutshane ngaphandle kobunzima be-Hardware okanye ukugcinwa. Iinkampani zinokubangela umyalezo omncinci wendawo ukwenza amava omxholo usebenzisa isicwangciso somgangatho. Itekhnoloji yoMyalezo we-SmartFocus yeLifu inika abathengisi bophawu uluvo olugcweleyo lwabathengi babo, ukubenza bakwazi ukuhambisa ukuhlangana okungaphezulu okwenzelwe wena kubandakanya nokunikezelwa komxholo, iintlawulo, ukuthembeka kunye nokuphononongwa.
Eli xesha leKrisimesi, abathengisi kunye namashishini banokunyusa ingeniso ngendlela enkulu: ngentengiso eshukumayo. Okwangoku, kukho i-1.75 yezigidigidi zabanini be-smartphone kwihlabathi liphela kunye ne-173 yezigidi e-US, ebala i-whopping ye-72% yentengiso yefowuni eMntla Melika. Ukuthenga kwi-Intanethi kwizixhobo eziphathwayo kutshanje kugqibe idesktop okokuqala kwaye iipesenti ezingama-52 zokundwendwela iwebhusayithi ngoku zenziwa ngefowuni ephathekayo. Nangona kunjalo, abathengi bahlala ixesha
NgoLwesibini, Oktobha 25, 2011 NgeCawa, Oktobha 4, 2015 Douglas Karr
Emuva ngo-Epreli, sabhengeza ukuba i-imeyile ye-imeyile ithengile i-SmartFOCUS. Ngu-Okthobha ngoku kwaye iziphumo zokudityaniswa akukho nto imangalisayo, ukudibanisa i-imeyile, ubuNtlola beNtlalo kunye noMthengi kwisisombululo esinye. I-imeyile ye-imeyile ibhengeze ngokusesikweni ukukhutshwa kweCandelo loMlawuli weKhankaso. I-SmartFOCUS yayinesisombululo somthengi-somncedisi kunye nomsebenzisi omangalisayo kunye nesiseko sedatha esenza ukuba kube lula ukwakha indawo yokugcina idatha yedatha kodwa ngokulula uyisike kwaye uyidayise ngexesha-lokwenyani-
NgoLwesine, Septemba 16, 2010 NgoLwesine, uJuni 9, 2016 Douglas Karr
QAPHELA: I-imeyile yokujonga ngoku iyinxalenye yeSmartFocus. Nangona kuyinyani ukuba amaqhawe ethu asekhaya, i-ExactTarget, ngoku ayandiswa e-United Kingdom nase-Australia, banqunyelwe kumazwe athetha isiNgesi. Kwangoko kulo nyaka, saba nethuba elimangalisayo lokudibana neqela lobunkokheli elinetalente kwi-imeyile ye-imeyile. Iziko laseClichy, eFrance (ngaphandle nje kweParis), i-Emailvision inokuba kuphela komboneleli weenkonzo ze-imeyile. Ujongano lwabo lomsebenzisi lunokuqhutywa ngesiNgesi sase-US, e-UK